Pick Zvino Place Machine, Kwakaita Pick Uye Place Machine, SMT Machine - Eton
1200 * 300mm Semi-Auto High nemazvo rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa kunoichik ...
High Akarurama Big Smt Machine, Doulble Side, A ...
Kwakaita Pick Zvino Place Machine, 8 Namachinda Kwakaita girobhu racho Sezvo ...
Reflow Valve Work hovhoni Machine michini Reflow S ...
Hot Tengesai SMT Reflow Valve Work muchoto 6 Nzvimbo Dzine Lea ...
Digital Display With Programmable Reflow Weldin ...
Shenzhen ETON Automation Equipment Co, LTD. yakagadzwa muna 2007, ive nevashandi vanopfuura mazana matatu pari zvino uye yekuvhara nzvimbo inodarika zviuru makumi maviri emamirita emita, ndiye mukuru wekutungamira wekugadzira wepamusoro-nekumhanya kutora uye mushini we SMT wekugadzirwa kwechiedza che LED uye munda weElectroniki, iri zvakare bhizimusi repamusoro uye repamusoro soro rinozivikanwa kwazvo muChina rine mukurumbira wakanaka.
ETON yakagadzira ichimhanyisa otomatiki otomatiki uye inoisa muchina nekumhanyisa 150000CPH, iri muchina unomhanyisa munyika, yakapihwa akawanda epakutanga tekinoroji patent, akagadzirisawo muchina wepasi rose wekutanga chero hurefu hwe1M 5M 50M 100M 500M inoshanduka musika muU.SA, KOREA, INDIA, GERMANY, EGYPT, TURKEY, VIETNAM, TUNISIA ETC.
Chii chinonzi mask Machine kupeta muchina?
Mask Machine yekupuruzira muchina inozivikanwawo seshinda yekupeta machira. Seizvo zita rinoratidza, iri masking kupeta. Chii chinonzi mask kupeta muchina? Izvi hazvifanirwe kutsanangurwa zvakawanda. Izvo zvinofanirwa kuzivikanwa kuti iyo mask inofanira kupetwa uye kurongedzwa.